Sawirro: Kulan su'aalo lagu weydiinayo Kheyre oo ka socda Villa Hargeysa - Caasimada Online
Home Warar Sawirro: Kulan su’aalo lagu weydiinayo Kheyre oo ka socda Villa Hargeysa
Sawirro: Kulan su’aalo lagu weydiinayo Kheyre oo ka socda Villa Hargeysa
Muqdisho (Caasimada Online) – Waxaa caawa Xarunta Villa Hargeysa ee Magaalada Muqdisho ka socda kullan uu albaabada u xiran yahay oo uu shir guddoominaayo ku-simaha Madadweynaha Dalka ahna Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan ”Jawaari”.
Warar hordhac ah oo aan goordhow helnay ayaa sheegaya in kulanka uu yahay mid ku saleysan Su’aalo Ra’isul wasaaraha Xukuumada Somalia Xasan Kheyre laga weydiinaayo qaab dhismeedka Ciidamada Qaranka.
Wararku waxa ay sheegayaan in Ra’isul wasaaraha Xukuumada uu su’aalaha ku wehlinaayo Wasiirka Difaaca Xukuumada Somalia C/rashiid C/laahi Maxamed.
Waxaa sidoo kale, madashada kulanka ku sugan Xildhibaano ka tirsan BFS, gaar ahaan Guddiga Difaaca baarlamaanka oo iyagu dhawaan shaki galiyay qorshaha dhismaha ciidanka.
Su’aalaha la weydiinaayo Ra’isul wasaaraha iyo Wasiirka difaaca ayaa waxaa kamid ah baahida xiligaani keentay in maamulada dalka laga soo xulo ciidamo kooban, iyadoo magaalada Muqdisho keliya ay ku dhaqan yihiin kumanaan ciidan hadana ay dhacaan falal amni darro ah.
Sidoo kale, Guddiga Difaaca Baarlamaanka Federaalka ayaa shalay Mooshin ka gudbiyay Hannaanka loo dhisayo Ciidamada Qaranka, waxaana lagu wadaa in Caawa uu Ra’isul wasaaraha sharaxaad ka bixiyo baahiyaha keenay in lasoo koobo ciidamada.